ပိုက်ဆံ တသောင်းနဲ့ အိမ်ပိုင်ခြင်း (သို့) မြန်မာလူမျိုးတွေကို ပျားရည်နဲ့ ရောထည့်တဲ့ ဂျင်း - Zet Star
ပိုက်ဆံ တသောင်းနဲ့ အိမ်ပိုင်ခြင်း (သို့) မြန်မာလူမျိုးတွေကို ပျားရည်နဲ့ ရောထည့်တဲ့ ဂျင်း
ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ တည်းနဲ့ အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် အခွင့်အရေးတဲ့….။
ကျွန်မ အိမ်မက်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်မို့ ကျွန်မမှာရင်တွေ ခုန်လွန်း…တုန်လွန်းလို့…စာဖတ်နေရင်း လက်တွေတောင်တုန်တယ်…။
အဲ့ဒီ ခံစားမှုတွေ သယ်ဆောင်ပြီး ကျွန်မ အဲ့ဒီပေ့ကို သွားတယ်…စာတွေ အကုန်ဖတ် ဗွီဒီယိုတစ်ချို့ သေချာသွားနားထောင်လိုက်တယ်…။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့… ကျွန်မလိုပဲ…မျှော်လင့်ချက် တွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်နဲ့ လူတွေ…လောဘကိုအခြေခံထားသူတွေ…မနည်းမနောပဲ…။
ဒါက လုံးဝ အမှန်အကန်အနေနဲ့ တွက်ကြည့်တာ…။ ကိုပြည့်ဖြိုး စကားဆုံးတော့ ကျွန်မ ရင်ထဲ…တဆစ်ဆစ်….။
ပြီးတော့… ငွေတွေ လု လွဲနေသူတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ နောက်ထပ် အတွေးဆိုး တစ်ခုထပ်တွေး မိတယ်…. အခု ငွေ လွှဲနေတာတွေက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးက… အများအားဖြင့် ရန်ကုန်က ဖြစ်ဖို့များပေမယ့် ကျွန်မတို့ သူတို့ ဘယ်သူတွေဆိုတာ မသိသလို ဘယ်ကလဲ… ဘာလဲဆိုတာလည်း လုံးဝစိတ် ဝင်စားကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ….။
အရင်ကတည်းက ဘာကို ယုံကြည်ရမယ်..မယုံရဘူးဆိုတဲ့ အချက်လက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ကံစမ်းခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ….ကိုယ့် ရှေ့မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မီနီကွန်ဒို လှလှလေးကို ပဲ မြင်ပြီး…လိုချင်စိတ်နဲ့ ကံစမ်းဖို့ မဆိုင်းမတွ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့​ကြတာ မဟုတ်လား….။
ကျွန်မ အဲ့ဒီပေ့ချ်ကို ထပ်မကြည့်ရဲ…ဖိုင်တွေ ထပ်မကြည့်ရဲအောင် ရင်ထဲဆို့နင့်နေတယ်….။ အခု စာရေးနေရင်းတောင်….လက်တွေတုန်လာတယ်… ဒီတစ်ခါ တုန်တာက ရင်ခုန်လွန်းလို့ မဟုတ်တော့ဘူး… စိတ်တွေမကောင်းလွန်းလို့…. မွန်းကြပ်လွန်းလို့ ။
← မြန်မာ့ ကိုယ်ပိုင်ထောက်လှမ်းရေး ဂြိုဟ်တု ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ လွှတ်တင်မည်
စာအုပ် တအုပ်ကြောင့် ဘဝ ပြောင်းသွားတဲ့ လူငယ်တဦး (လူငယ်တွေ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှိတာ ဝမ်းသာစရာပါ) →